Zimbabwean Govt Admits Printing Money - allAfrica.com
The government had previously denied that it was printing its own money in order to pay the civil service.
Financial Gazette, 27 April 2017
Zimbabwe Independent, 28 April 2017
If we use an average minimum wage of US$250 per month the loss goes down to half. This will translate into slightly below half a billion US dollars per year if the cash shortages… Read more »
Zimbabwe: Businesses Cash in On Cash Seekers
Business people are taking advantage of prevailing liquidity challenges by charging premiums of between 10 and 20 percent to desperate cash seekers. Read more »
Zimbabwe: Bond Notes Alone Won't Solve Nation's Problems - IMF Official
Bond notes alone won't address Zimbabwe's cash challenges, a top International Monetary Fund official has said. Read more »
Zimbabwe: No More Bond Notes for Now - Central Bank Governor
News24Wire, 23 April 2017
Are you hoping for respite from Zimbabwe's cash squeeze? Read more »
Zimbabwe: Where Is the RBZ?
LAST week, we reported that cash barons were on the prowl in the country, rescuing Zimbabwean firms with huge sums of foreign currency to pay for critical imports, but in the… Read more »
Zimbabwe: E-Payments Must Be Universal, Simple
The shortage of banknotes, including bond notes, in the Zimbabwean banking system, has generated a huge surge in use of the electronic transfer systems, but to give Zimbabweans the… Read more »
It doesn't matter how much sense it makes to ordinary Zimbabweans: Zimbabwe will not formally adopt the rand, the central bank governor says. Read more »
Zimbabwe: Exploring The Economy 37 Years On
April 18 2017 marked 37 years of the country's Independence from colonial rule. The definition of Independence in 1980 included freedom from the white minority regime, freedom of… Read more »
Zimbabwe: Government Admits 'Printing' Money
PRESIDENT Robert Mugabe's embattled administration has for the first time admitted printing money in the form of a virtual currency through the Real Time Gross Settlement (RTGS),… Read more »
Zimbabwe has used the U.S. dollar since 2009 to substitute its own failed currency. A trade deficit for several years, importing more than it exports has led to the country ... Read more »
Zimbabwe: Here They Come - Govt to Roll Out 10, 20 Bond Notes
The introduction of a new 5-dollar bond note reminds Zimbabweans of the last time they had a currency of their own, whose biggest denomination was a U.S.$100 trillion note that ... Read more »